Bilaogera Nampijaliana Ho Faty Tany Am-ponja, Herintaona Lasa Izay · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Nampijaliana Ho Faty Tany Am-ponja, Herintaona Lasa Izay
Voadika ny 08 Novambra 2013 22:24 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Català, English
Nasreen Stoudeh, mpisolovava, miaraka amin'ny renin'i Sattar Behesh nandritra ny hetsika fahatsiarovana ilay bilaogera nisy namono. Sary tao amin'ny “Exile Activist”
Tamin'ny fitsingerenan'ny faha-herintaona nahafatesan’ ilay bilaogera Sattar Beheshti namoy ny ainy tany am-ponja, nikarakara hetsika ireo mpikatroka ny zon'olombelona, namana sy fianakaviana tamin'ny 31 Oktobra 2013 mba hanome voninahitra azy tao Teheran.
Nosamborina tamin'ny faran'ny volana Oktobra 2012 i Beheshti ary nambara fa namoy ny ainy folo andro taty aoriana. Tamin'izany fotoana izany, namoaka [fa] fanambarana ireo gadra politika iraika amby efa-polo ary nilaza fa nahita maso ny diam-bono teo amin'ny vatan'i Sattar.
Nlaza ilay bilaogera iraniana Arsalan Rahimi fa tonga namonjy ny hetsi-pahatsiarovana ihany koa i Nasreen Stoudeh, mpisolovava izay niaro gadra politika marobe ary efa nifonja, sy i Mohammad Nourizad, mpikatroka politika sy mpanao gazety teo aloha tao amin'ny mpandala ny mahazatra Keyhan.
Hoy ilay bilaogera nanoratra [fa]: «Na inona atao sy lazain'ireo mpikatroka nitsoa-ponenana, dia tsy hanana fiantraikany tahaka ny fahatongavan'ireo olona roa ireo …. tsy maninona izay inoan'izy ireo, na hihaona amin'i Khatami [filoha reformista teo aloha] aza izy ireo. Ny zava-dehibe, dia ny tolona ataon'izy ireo manohitra ny fangejana … Ho ela velona anie izy ireo sy ireo izay mitolona ao amin'ity firenena ity.”
Bilaogera hafa, Bala-vision, nilaza [fa] fa araka ny loharanom-baovao mari-pototra marobe, nampijaliana i Sattar Beheshti. Andro vitsy lasa izay, mpiserasera hafa marobe koa no nosamborina.
Bilaogera iray hafa, “Mpikatroka mpitsoa-ponenana” nizara sary tamin'ny hetsi-pahatsiarovana (eo ambony) ary nampahatsiahy antsika fa bilaogera i Beheshti izay niteny ho fiarovana ny sarangan'ny mpiasa.
Tamin'ny lahateny nandritra ny hetsika (jereo ny lahatsary eto ambany), nampahery ny renin'i Sattar Beheshti i Mohammad Nourizad, ary namely ireo mpitondra iraniana, izay nantsoiny hoe «ny tena endriky ny mpangeja.” Hoy izy raha nitodika tany amin'ny renin'i Beheshti «Natao ny revolisiona mba hiarovana ireo olona tahaka anao, saingy nahita ny ràn'ny zanakao lahy ireo solombavambahoaka iraniana 290 fa nandà izany.”
Fahatsiarovana an'i Sattar tao Stockholm
Nandrehitra labozia ireo mpikatroka politika tao Stockholm, ao Soeda. Nahatsiaro ireo gadra politika marobe hafa ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana.
Marobe ireo bilaogera mbola any am-ponja, ary vao haingana, nampitandrina ny Amnesty International fa tsy nahazo fitsaboana sahaza azy ilay bilaogera any am-ponja Mohammad Reza Pourshajari.
Teo amin'ny efa-taona lasa teo izay, bilaogera hafa, Omid Reza Mirsayafi namoy ny ainy tany am-ponja tao anatin'ny toe-javatra mampiahiahy.